Uluhlu lwamagama: uLuhlu lokuPhefumlelwa kunye noPhando loKhuphiswano lwaBathengisi be-imeyile | Martech Zone
Uluhlu lwamagama: uLuhlu lokuPhefumlelwa kunye noPhando loKhuphiswano lwaBathengisi be-imeyile
NgoLwesine, uJanuwari 8, 2015 NgoLwesine, Novemba 12, 2015 Douglas Karr
Uluhlu lwamagama Ukuzithengisa ngokwabo njenge-Injini yeKhompyutha yokuKhangela iiNjini, zinezalathiso ngaphezulu kwezigidi ezi-5 zeeleta zokukhangela nge-imeyile ngaphezulu kwabaPapashi abangama-400,000. Izixhobo ezinje ngezi ziyinto emnandi kubaqulunqi abanqwenela ukufumana ukukhuthazwa kwiimveliso eziphambili okanye abathengisi bedijithali abafuna ukubona xa abo bakhuphisana nabo bethumela kwaye luhlobo luni lweencwadana kunye nezahlulo ezithe zaziswa.
Ukuba ulishishini elingenazo izixhobo zokuvavanya, ezi zixhobo zinokuba luncedo ngakumbi kuba abapapashi abakhulu basebenzise umzamo omkhulu ekufumaneni ii-imeyile zabo ngokuchanekileyo!
Uluhlu lwababhali lunezinto ezimbalwa kunye nezibonelelo:
UkuKhangela okuPhambili kunye nokucoca -Khangela ngesihloko, igama lomthumeli, idilesi ye-imeyile yomthumeli, isicatshulwa somzimba okanye i-URL. Hluza ngomhla, i-Alexa isikhundla kunye nombala.
Iitshati eziPhambili zokuHamba Iimpawu zeSpot kunye nombukeli wexesha lethu elisebenzisanayo, emva koko usondeza ixesha elibalulekileyo kunye nemihla ethile ukuze ujonge ngakumbi.
I-Digests yemihla ngemihla -Gcina ixesha kwaye ungaze uphoswe ngumkhankaso nge-imeyile yemihla ngemihla yemikhankaso emitsha yeempawu zakho ozithandayo.
Uhlaziyo lwexesha lokwenyani -Imikhankaso iyafumaneka ukukhangela kwangoko ithunyelweyo, kwaye igcinwe ngokusisigxina.
Inkxaso 24 / 7 -Zilapha xa uzifuna, nokuba kungumbuzo, ingxelo yegciwane okanye isindululo semveliso.
Unokufumana nemicimbi yethu edlulileyo ekhoyo!
Uluhlu lwababhali longeze iPro, umgangatho wenkonzo ophuculweyo owongeza:
Iziphumo zokukhangela okwenyani -Ukufika kwangoko kwephulo, liyakhangelwa. Ngaphaya koko, iqhosha 'lokuHlaziya ngoku ngoku''kwiphepha leziphumo zokukhangela ngoku likuvumela ukuba uqhubeke ujonge ukukhangela kwe-ad-hoc kwezinto ezintsha ezingenayo.
Idashboard ebukhoma -Ukubeka uphawu endaweni yokukhangela oyithandayo yindlela entle yokuhlala phezulu kwezinto, kodwa ngekhe kubengcono ukuba unokubabona bonke endaweni enye? Ideshibhodi ephilayo yenza kanye le nto: idibanisa iziphumo zazo zonke iibhukumaka zakho kwimbonakalo yexesha elinye elihlaziya ngokuqhubekayo njengokufika kwezinto ezintsha. Yicinge njengokutya kwe-Twitter kwimikhankaso yeendaba ekunika umdla.
Izilumkiso ze-imeyile yokwenyani- Ezinye izinto azinakulinda. Okubaluleke ngakumbi, ezinye izinto azinakuphoswa. Ngezilumkiso zexesha lokwenyani, unokufumana i-imeyile kwangoko xa kufika iphulo elitsha lazo naziphi na iibhukumaki zakho.
Izixhobo zetshathi Iziphumo zophando sele zibandakanya iitshathi ezibonisa ubungakanani beentsuku ezingama-90 zokukhangela. Kodwa kuhlala kubalulekile ukuthelekisa amagama amaninzi ukubona ukuba yintoni ehambayo kwaye yintoni ehla ezantsi, okanye nokuba yeyiphi phakathi kwabo aziwa kakhulu. Nge-visualizer, unokwenza nje oko kwaye ubone iziphumo njengomgca okanye iitshathi zepie.
tags: ukhuphiswano lwe-imeyileuphando lokhuphiswanoemailezona ndlela zilungileyo ze-imeyilei-imeyile yedathaUyilo lwe-imeyileimizekelo ye-imeyileinjini yokukhangela ye-imeyileUvavanyo lwe-imeyilenewsletterUyilo lweeletaUkuphefumlelwa kweletauluhlu
Awulunganga, Nazi izizathu ezi-4 zokuba kutheni iMedia Media ifuthe kwi-SEO